“Ronaldo Wuxuu ka Careysan yahay Lacagaha lagu soo iibiyay Neymar wuxuuna Caawa doonayaa inuu Caalamka tuso inuu ka Laacibsan yahay.”. – Gool FM
Shaxda rasmiga ah kulanka Europa League ee Chelsea Vs Malmoe
Wakiilka Koulibaly oo tilmaamay in Daafucu diyaar u yahay in uu u dhaqaaqo dhanka Horyaalka Ingiriiska
Tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp oo la ganaaxay
Shaxda rasmiga ah kulanka Europa League ee Arsenal Vs Borisov
Atletico Madrid oo toddobaadka soo socda heshiiska u kordhinaysa goolhaye Oblak mushaar fiicanna siin doonta
Maxaa ka jira wararka sheegaya in Manchester United ay la xiriirtay weeraryahan Luis Suarez?
Barcelona iyo Arsenal oo isku garbinaya xidigga Khadka dhexe ee kooxda kooxda Lyon
Sarri oo loo soo bandhigay qorshe uu uga soo baxsanayo kooxda Chelsea
Isku aadka wareega 16-ka Europe League oo Berito la sameynayo….(Chelsea iyo Arsenal oo….)
Andrea Pirlo oo si kulul u weeraray xidigaha kooxda Juventus, kadib guuldaradii Atletico Madrid
“Ronaldo Wuxuu ka Careysan yahay Lacagaha lagu soo iibiyay Neymar wuxuuna Caawa doonayaa inuu Caalamka tuso inuu ka Laacibsan yahay.”.
Byare February 14, 2018
(Madrid) 14 Feb 2018. Ronaldo iyo Neymar ayaa shaki la’aan doonaya inay caawa Caalamka u muujiyaan xiddignimadooda marka ay isaga horyimaadaan Lugta hore ee wareega 16-ka Champions League.
Los Blancos ayaa mininkeeda ku marti galineysa Camaaliqada Faransiiska kulan ay ka soo muuqan doonaan xiddigo qaali ah.
Lothar Matthaus rugcadaagii hore ee Jarmalka ayaa sheegay in Ronaldo uu caawa kulankan u ciyaarayo inuu caalamka tusiyo inuu ka laacibsan yahay xiddiga lagu iibsaday lacagaha ugu badan kubbada cagta ee Neymar.
“Shaki kuma jiro in Real Madrid iyo PSG ay ku tiirsan yihiin xiddigahooda Cristiano Ronaldo iyo Neymar,” Matthaus ayaa sidaa u sheegay The Sun.
“Labadooduba waxay doonayaan inay caddeeyaan in midba uu midka kale ka laacisan yahay.
“Ronaldo wuxuu muujiyay kal ciyaareedkii tagay sida uu koobkan ugu guuleysan karo.
“Bayern Munich ayuu Shan ka xareeyay, Saddexleey ayuu ka muday Atletico Madrid isagoona labo gool ka dhaliyay Juventus ciyaartii Final ka.
“Ronaldo Cajiib ayuu ahaa. Wuxuu Real Madrid kula guuleystay Champions League balse iminka heerkaas ma joogo.
“Neymar waxaa lagu iibsaday lacago badan taa oo ka careysiineysa Ronaldo. Dhabtii ma jecla inuu ka dambeeyo wiilka reer Brazil wuxuuna doonayaa inuu caawa bixiyo Bandhig oranaya “Anigaa ugu fiican waana muujiyay midaa’.”.
Unai Emery oo caawa keydka u dhaadhicinaya laacib wayn kulanka Real Madrid
Waa sidee diyaar garowga Santiago Bernabeu ka hor kulanka Real Madrid vs PSG? (SAWIRRO)
Chelsea oo ciqaabtay Malmoe iyo Inter Milan oo ku raaxeysatay Rapid Wien +Sawiro
Arsenal oo guul wax ku ool ah ka gaartay kooxda BATE Borisov una gudubtay wareega 16-ka +Sawiro
Chelsea oo ciqaabtay Malmoe iyo Inter Milan oo ku raaxeysatay Rapid Wien +Sawiro https://t.co/8OcyVnB2BY
Arsenal oo u gudubtay wareega 16-ka ee Europe League, kadib markii ay guul ka gaartay kooxda BATE Borisov + SAWIRO https://t.co/vSUwxiXUHa
Shaxda rasmiga ah kulanka Europa League ee Chelsea Vs Malmoe https://t.co/BR7kmoGfjg